“Cristaino Ronaldo si maskaxeysan ayuu kaga orday Lionel Messi, sababtoo ah…” – Jamie Carragher – Gool FM
(Spain) 27 Mar 2020. Daafacii hore kooxda kubadda cagta Liverpool ee Jamie Carragher ayaa aaminsan in Cristaino Ronaldo uu si maskaxeysan isugu dayay inuu u qariyo in dhigiisa Lionel Messi uu ka fiican yahay isaga.
Iyada oo Messi uusan ka tegin Barcelona muddadii uu kubada cagta ciyaarayay oo dhan, ayaa waxaa had iyo jeer jirtay su’aal la is weydiin jiray ee ku aadan bal haddii uu ku fiicnaan karo meel kale ee aan aheyn Barca, gaar ahaan horyaalka Premier League.
Marka laga hadlayo Cristiano Ronaldo, wuxuu u soo ciyaaray Manchester United, kaddibna wuxuu u dhaqaaqay Real Madrid, ka hor inta uusan ku biirin Juventus. Xiddiga reer Portugal ayaa ku soo bandhigay heerar kala duwan dhamaan kooxahan isagoo ku hogaamiyay Los Blancos afar koob oo tartanka Champions League ah.
Haddaba wareysi uu bixiyay Jamie Carragher ayaa waxaa soo xigtay war sidaha “Goal” waxaana hadalidiisa ka mid ahaa:
“Cristiano Ronaldo wuu ogyahay inuu had iyo jeer ka dambeeyo Lionel Messi, sidaas darteed wuxuu ka tagay horyaalka Spain, marka waxaan u maleynayaa inuu aad u caqli badan yahay”.
“Ronaldo wuxuu isku dayayaa inuu sameeyo waxa ka soo horjeedda waxa uu sameeyo Messi, isla markaana uu muujiyo inuu wax yar ka duwan yahay, wuxuu ka soo ciyaaray kooxo badan sidaas darteed wuxuu dhihi karaa waxaan ku guuleystay horyaalada dhamaan dalalka aan ka soo ciyaaray, waxaana ahaa gooldhaliyaha ugu sareeya dhamaan dalalkan”.
“Waligey kuma fikirin in Maldini iyo Franco Baresi ay baxayaan, sababtoo ah kama aysan tagin Milan, sidaas darteed ma badelayo fikirkeyga ku saabsan Lionel Messi, waxaan ula jeedaa, muxuu uga tagayaa Barcelona? Waa arrin doqonimo ah, waxa uu joogaa kooxda ugu fiican adduunka, waa ciyaaryahanka ugu fiican kooxda, waana ciyaaryahanka ugu fiican Yurub”.
Luis Enrique oo shaaca ka qaaday labada xiddig uu ugu jecelyahay adduunka